Faransiiska Oo Gaaray Finaalka Koobka Aduunka – Radio Muqdisho
Faransiiska Oo Gaaray Finaalka Koobka Aduunka
Xulka qaranka France ayaa u gudbay kama danbeysta tartanka kadib markii ay garaceen dalka Belgium oo deris ay yahiin.
Qaybtii danbe gool uu dhaliyay Umititi ayuu qaranka Faransiiska ugu adkaaday dalka Belgium oo ahaa dalka goolasha ugu badan ka dhaliyay koobka aduunka sanadkaan 2018 balse ayeey ku guuldareysteen in shabaqa ay soo taabtan.
Ciyaarta inta badan waxaa maamulyay dalka Belgium halka Faransiiska uu difaac ku jiray ayadoo gool in laga dhaliyo uu dagaal ugu jiray waxaana ugu danbeyntii uu helay gool waxaana dib uu ugu laabtay qaab difaafeedkii uu ciyaarta ku bilowday.
Roberto Martinez oo ahaa macalinka Belgium ayeeysan u suurta gelin in uu noqdo markii ugu horeysay macalin Ajanabi ah oo koobka aduunka ku guuleysto balse taasi horey uma dhicin.
Faransiiska ayaa kama danbeysta tartanka waxaa u sahlay 20-sano ka hor Thuram oo difaac ahaa caawa labaatan sano kadib in ay gaaran sidoo kale waxaa u sahlay Umititi oo difaac ah waxaana taasi ay soo xusuusisay tageerayaasha dalka Faransiiska guushii sanadkii 1998 xiligaasi oo koobka ay ku guuleysteen waxaana kama danbeysta tartanka uu la ciyaari doona dalalka Ingiriska iyo Croatia oo habeen danbe ciyaari doono.
Belgium waa markii ugu horeysay oo laga adkaado 25 kulan kadib ayadoo sidoo kale uu ka soo adkaaday dalka Brazil oo waqti fara badan aanan la kulmin guuldaro.
Macalinka Faransiiska Didier Deschamps hadii uu ku guuleysto koobka aduunka sanadkaan waxaa uu barbareyn doono Mario Zagallo iyo Franz Beckenbauer oo ku guuleystay koobka aduunka ayagoo Ciyaartoy ah iyo ayadoo ay hogaaminayaan dalalka Brazil iyo Faransiiska Didier Deschamps ayaa noqon doono shaqsigii sadexaad ee sidaasi oo kale sameyso ayadoo Didier Deschamps lagu xusuusto in uu ahaa kabtankii faransiiska 1998-dii.
Didier Deschamps waxaa uu ku guuldareystay in uu ku guuleysto koobkii qaramada qarada Yurub oo dalkiisa uu marti geliyay laba sano kor kaasi oo uu ku guuleystay dalka Portugal hada waxaa uu soo gaarsiiyay dalka Faransiiska markale kama danbeys koob balse su,aasha ayaa ah ma ku guuleysan doono Didier Deschamps ?